ဆုတံဆိပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု ရယူနေတဲ့ OnDoctor | OnDoctor
By Dr. Kaung Htet Naing	 On Nov 5, 2019
OnDoctor ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ ၊ Infographics များ နဲ့ Videos များကို Facebook Page ၊ Website နဲ့ Application တွေမှတဆင့် အခမဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Company တစ်ခုပါ။ဒါ့အပြင် OnDoctor ရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Application Users များမှတဆင့် မေးမြန်းလာတဲ့ ကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေကို ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် အခမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ OnDoctor Company ဟာ အခုအချိန်မှာ ပြည်တွင်းမှာသာမက အာဆီယံဒေသအတွင်းမှာပါ ဆုတံဆိပ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆွတ်ခူးရရှိလျက်ရှိပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Myanmar Rice Bowl Startup Awards 2019 မှာ
Myanmar’s Best Life Helper Award
Myanmar’s People Choice Award တို့ကို ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြီး အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ကို ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာလည်း OnDoctor အနေနဲ့ အာဆီယံဒေသမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဆုတစ်ခုလို့ဆိုရမယ့် “ ASEAN Business Award 2019 ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုပေးပွဲကို ASEAN BUSINESS AND INVESTMENT SUMMIT 2019 နဲ့အတူတူ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး OnDoctor ရဲ့ CEO Dr.Htet Zan Linn ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီး ဆုကိုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။
ဖော်ပြပါဆုတွေအပြင် ၂၀၁၈ မှာလည်း OnDoctor အနေနဲ့ ဆုတံဆိပ် ၂ ခု ဆွတ်ခူးထားခဲ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ K Bank Biz Plan Challenge ရဲ့ Winner ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
၂၀၁၈ မှာ အာဆီယံဒေသအတွင်းဆုအနေနဲ့ ASEAN ICT AWARD 2018 ကိုရရှိခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီမှာ ဆုကို သွားရောက်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ ဆုတွေအလီလီ ဆွတ်ခူးနေနိုင်တာကိုကြည့်ရုံနဲ့ OnDoctor Company ဟာ အများပြည်သူကျန်းမာရေးကို ကူညီပေးတဲ့နေရာမှာရော မိတ်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချဖွယ်အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားလျက်ရှိပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံး ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါဦးမယ် ……….
OverNight Mask / Sleeping Pack/ Sleeping Mask ဆိုတာ ဘာလဲ??